January 2015 | မိုးသကျဦးလှငျ
ဒီနေ့ ဆိုင်ကယ်စီးနေရင်းနဲ့ လမ်းမှာဆိုင်ကယ်တွန်းလာတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲတွေ့တယ်.။ နေပြည်တော်လမ်း ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာက အဝေးကြီးတွေမဟုတ်လား.။ ဆိုင်ကယ်ရပ်ပေးပြီး.. ကိုယ့်ပါးစပ်က လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားတာက "မင်္ဂလာပါအစ်ကို" တဲ့.။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် ပြုံးမိသွား တယ်.။ သူတို့ကို အကူအညီပေးမလို့ပါ.။ ဆီပြတ်သွားတာလား အစ်ကိုဆိုတော့. မဟုတ်ဘူးအစ်ကို ဘီးပေါက်သွားလို့ပါဗျာ. တဲ့.။ ဆီပြတ်သွားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က တော်တော်ဝေးသေးတဲ့ လမ်းထောင့်က ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ ဘူးနဲ့ ဝယ်ပေးမလို့ပါ.။ ဘီးပေါက်သွားတာဆိုတော့လည်းကိုယ်လည်း မကူညီနိုင်ဘူးပေါ့.။ အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ သူက ပြန်ပြောတယ်.။ လမ်းမှာတစ်လမ်းလုံး စဉ်းစားမိတာက နိုင်ငံခြားမှာနေတုန်းက ဘယ်သူမဆို မိသားစုချင်းတောင် မနက်ခင်းလင်းရင် Доброе утро! (ကောင်းသောနံနက်ပါ) Здресвтвуйте! စသဖြင့် နှုတ်ဆက်ကြတယ်.။ အင်္ဂလိပ်တွေ၊ အမေရိကန်တွေလည်း တွေ့ရင် အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တယ်.။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားက ဆိုင်က အရောင်းဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ မှာသာအများဆုံးတွေ့နေရပြီး အပြင်လောကမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ စကားမရှိသလောက်ပျောက်သွားပြီ.။ ခုနက ကျွန်တော် ယောင်ပြီး နှုတ်ဆက်မိတဲ့အခါ ဟိုလူက ပြုံးစေ့စေ့ ဖြစ်သွားတာတောင် သတိထားမိတယ်.။ စိတ်ထဲမှာ မင်္ဂလာပါ ဆိုတဲ့ Campaign လေးတစ်ခု လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့တောင် စဉ်းစားမိတယ်.။ မြန်မာလူမျိုးမှန်ရင် တွေ့တဲ့အခါ မင်္ဂလာပါ လို့ နှုတ်ဆက်ပါဆိုတဲ့ တီရှပ်လေးတွေ ထုတ်မယ်.။ ယဉ်ယဉ်နှောင်း တို့ ကိုကိုးအိမ် တို့ နဲ့ တိုင်ပင်ဦးမယ်. လို့ စိတ်ကူးနေမိပါတယ်.။ ကိုယ့်ကိုလည်း Popping တွေလုပ်နေတယ်ထင်မှာလည်း စိုးရပါတယ်.။ ပိုဆိုးတာက ရွေးကောက်ပွဲကို အာရုံလွှဲချင်တာ ဘာဘာညာညာတွေ ခေါင်းစဉ်တပ်မှာအဆိုးဆုံးပေါ့.။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ Campaign လေးလုပ်ကို လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားမိတယ်.။
ဘဝဟာ တစ်ချို့ကိစ္စတွေလောက်ပဲ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာကောင်းတယ်...။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာ ဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ ရင်ဘတ်တွေကို နီးကပ်စေပြီး ပိုမိုနွေးထွေးမှုကိုရမယ်.။ မလိုအပ်ပဲ လျှို့ဝှက်တတ်တာဟာ ကိုယ့်ကို သူများပေးတဲ့သံသယတွေပဲ ပိုရလိမ့်မယ်.။
" မ ဖက်လိုက်ပြီး မိုက်ဖက်ပါသွားတဲ့အခါ...
၅၂၈ ရင်ခွင်မှာ စုံကန်တဲ့ခြေရာတွေချည်း "
ညက အိပ်မက်ထဲမှာ အမေဆုံးသွားသတဲ့..။ အိပ်မက်ပေမယ့် လန့်နိုးလာတဲ့အခါ မျက်ရည်တွေ အပြင်မှာပါကျနေတယ်..။ အမေ့ဆီဖုန်းဆက်တော့ အမေကတောင် စိတ်ပူနေသေးတယ်..။ သင်္ခါရမှန်းသိပေမယ့် အမေဆိုတာ သားသမီးတွေရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မသေတဲ့သူပဲလေ.။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘယ်လောက်တော်တော်၊ ကိုယ့်အဖေထက်တော့ ဦးစားမပေးနိုင်ဘူးလေ.။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကိုယ့်အမေထက် ပိုစရာအကြောင်းမရှိဘူး..။ ဒါဟာ လူပီသတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သဘာဝလို့ပဲ ထင်မိပါတယ်.။ သဘာဝထက်ထူးရင် အစွန်းရောက်နေပြီလို့သာမှတ်ပေတော့...။
ခုတလော တရုတ် Brand Xiaomi တွေခေတ်စားနေတယ်.။ ညွှန်းချက်တွေကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ.။ အိုင်ဖုန်းကိုယ်ထည်နဲ့ Samsung ဖုန်းကို သုံးရသလိုပဲတဲ့.။ တစ်ချို့ကလည်း ဆမ်ဆောင်းထက်ပိုကောင်းသတဲ့.။ တစ်ချို့ကဆိုရင် ကိုင်ဖူးသမျှ Android တွေထဲမှာ အတန်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပဲတဲ့.။ Official site ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့ Mi pad တို့ဘာတို့ပါ တွေ့တယ်.။ ကိုယ်လည်း အရင်ဆိုနီဖုန်းလေးတုန်းက MI ကထုတ်တဲ့ Miui custom firmware လေး တင်သုံးကြည့်ဖူးတယ်.။ အဲဒီကတည်းက ကာလာရော UI ကိုရောကို သဘောကျနေတာ.။ လျှော့တွက်လို့ မရတဲ့ထဲမှာ ရှောင်မီလည်းပါလာတယ်.။ အရင်က ဖုန်းဝယ်မယ်ဆို ပြေးပြေးကြည့်နေကျ.။ GSM mania တို့ဘာတို့မှာတောင်မှ လူကြည့်အများဆုံး Rating မှာ နံပတ် ၁ ဖြစ်နေတယ်.။ ဝယ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်။
ရန်ကုန်နောက်တစ်ခေါက်သွားစရာပေါ်လာတယ် .။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပါ.။ ပထမအခေါက်တုန်းက မတွေ့လိုက်ရတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကို ဦးစားပေးပြီးတွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်.။ ကျွန်တော်က အစစ်အမှန်ကို ရှာတာပါ.။ facebook ကို ကိုယ့်ဓာတ်ပုံ၊ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ သုံးပြီး တွေ့တဲ့သူတိုင်းအပေါ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် မိတ်ဆွေစစ်တွေ ပေါ်လာတာပါပဲ..။ အပြင်မှာတွေ့တော့လည်း တကယ့် မောင်နှမ အရင်းတွေလို၊ မိတ်ရင်းဆွေရင်းတွေလိုပဲ.။ ပွင့်လင်းမှုဟာ လိပ်ပြာသန့်ခြင်းကို ပေးသတဲ့.။ လိပ်ပြာသန့်ခြင်းဟာ အနူးညံ့ဆုံးသော ခေါင်းအုံးပါတဲ့.။ လိပ်ပြာသန့်တဲ့အခါ အနှစ်ခြိုက်ဆုံးသော အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ အိပ်စက်ရတာပေါ့.။ ကိုယ့်ကိုယ် ခြောက်လှန့်မယ့် အရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့..။
Stress အရမ်းမိနေတဲ့ ဆရာဝန် ညီမလေးတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး ငိုတယ်.။ ဒါတောင် သူနိုင်ငံခြားမှာမဟုတ်ဘူး ပြည်တွင်းမှာပဲ.။ အလုပ်ကိစ္စတွေ သိပ်များနေတဲ့အချိန်မှာ၊ အပြင်လောကနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းလာတဲ့အခါ Stress တွေ သိပ်များလာတတ်တယ်။ စိတ်ကျရောဂါလည်း ဖြစ်လာတတ်ယ်.။ Depression ဝင်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် အဓိပ္ပာယ်မရှိသလို ခံစားရတယ်.။ အထူးသဖြင့် ခံစားမှုအားကြီးတဲ့ အီမိုးရှင်းသမားတွေ အဖြစ်များတယ်.။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှကတော့ Stress များလာရင်..။
(၁) အလုပ်ကိုဖြေလျှော့ပါ.။ ဖြစ်နိုင်ရင် ခွင့်ယူပြီး အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးတိုတစ်ခုထွက်ပါ.။
(၂) သူငယ်ချင်းများနဲ့ တွေ့ဆုံပါ.။ shopping ထွက်တာမျိုးဟာ Stress ကျစေပါတယ်.။
(၃) လေ့ကျင့်ခန်း ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လုပ်ပါ.။ ချွေးထွက်လာတဲ့အခါ စိတ်တင်းကြပ်မှုကို ပြေလျော့စေပါတယ်.။ အထူးအကြံပြုတဲ့အားကစားဟာ ရေကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.။ ရေကူးခြင်းဟာ Stress ကျစေပါသတဲ့.။
(၄) အထက်ပါအခြေအနေတွေ မပေးရင် အိမ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ တဲ့.။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့.။ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သွားတဲ့ အိမ်ခန်းဟာ စိတ်ကို ကြည်လင်ပြီး Stress ကို လျော့ကျစေပါသတဲ့။
(၅) ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားကို ဝတ်ပြုရှိခိုးပါ.။ ရှိခိုးပြီးတဲ့အခါ မိမိယုံကြည်ရာ ဘုရားကို အာရုံပြုပြီး စိတ်ကြည်တဲ့အထိ ဆိတ်ငြိမ်စွာ ထိုင်ပါ.။ သက်တောင့်သက်သာအနေအထားရှိပါစေ..။
ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသလောက် Stress ကျစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်.။
Posted by မိုးသက် at 1:28 AM0comments Read more
Labels: အတွေးစများ, ရောက်တတ်ရာရာ
အပျင်းပြေတောင် စာမဖတ်တဲ့သူ ငြီးငွေ့တာဘာဆန်းသလဲ...
သော့ချိတ်လေးတစ်ခု ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ရင်း ငေးကြည့်လို့....။
Posted by မိုးသက် at 4:57 AM0comments Read more
သော့ချိတ်ဟာ အတုနဲ့အစစ် ခွဲမရအောင်တူတယ်..
သော့ချိတ်ဟာ သော့မှာမချိတ်ပဲ. သံယောဇဉ်မှာချိတ်တယ်. မင်းလမ်းမုန့်တီမှာချိတ်တယ် နွေဦးကံ့ကော်မှာချိတ်တယ်... အင်းယားညနေစောင်းတွေမှာချိတ်တယ် ... ရွှေတိဂုံတောင်ဖက်မုခ်က နှင်းဆီဖြူဖြူတွေမှာချိတ်တယ်...
သော့ချိတ်ဟာ အတုနဲ့အစစ် ခွဲမရအောင်တူတယ်...
အသည်းနှလုံးပုံလို့ ဆိုပေမယ့် အသည်းနှလုံးပုံမဟုတ်တာ သူရောကိုယ်ပါသိတယ်..။
အသည်းနဲ့ နှလုံး မတူဘူးဆိုတာလည်း သူရောကိုယ်ပါသိတယ်..။
ရင်ခုန်သံနဲ့ အနီးဆုံးအိပ်ကပ်မှာထားတဲ့ သော့ချိတ်က အင်္ကျီကိုဖောက်တယ်..
အရေပြားကိုဖောက်တယ်..။ အဆီပြင်ကိုဖောက်တယ်.။ အသားစိုင်ကိုဖောက်တယ်.။ ကြွက်သားမျှင်တွေကိုဖောက်တယ်.။ နံရိုးခွေကိုဖောက်တယ်.။ နှလုံးသားအထိ ပေါက်တယ်.။
သော့ချိတ်ဟာ အတုနဲ့အစစ် ခွဲမရအောင်တူတယ်...။
မရေမတွက်နိုင်တဲ့ Miss calls တွေဟာ သော့ချိတ်ကို မျှော်တယ်.။ Reply ပြန်မလာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေဟာ သော့ချိတ်ကို မျှော်တယ်.။ ဒုတိယမ္ပိ အင်းယားညနေစောင်းဟာ Spy ရနံ့သင်းသင်းနဲ့ သော့ချိတ်ကိုမျှော်တယ်.။ ဒုတိယမ္ပိနွေဦးကံ့ကော်ဟာ တမင်တကာ နှင်ထုတ်မှုအမူအယာတွေကြားကသော့ချိတ်ကိုမျှော်တယ်..။ ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုခ်က နှင်းဆီဖြူတွေဟာ ဟန်ဆောင်နေမှန်းသိသိလျက်နဲ့ သော့ချိတ်ကိုမျှော်တယ်..။
အဖက်မတန်ခြင်း၊ အရေးမထားခြင်း၊ စိတ်ကုန်ငြီးငွေ့ခြင်းတွေဟာ သော့ချိတ်ကို ပြန်ခေါ်မလာတော့ဘူး...။
သေချာတယ်... ကျွန်တော်ရခဲ့တာ သော့ချိတ်အတုပဲ...
သော့ချိတ်ဟာ အတုနဲ့အစစ် ခွဲမရအောင်တူတယ်...။
Posted by မိုးသက် at 6:54 AM0comments Read more
Posted by မိုးသက် at 9:31 AM2comments Read more